Njem ịga Barbados, ala Rihanna | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Barbados, Osimiri
Oke Osimiri Caribbean bụ otu n'ime ebe kachasị mma na mbara ala na ebe ezumike magburu onwe ya na karịa karịa Polynesia, dịka ọmụmaatụ. Agwaetiti dị iche iche nwere agwa ha ma kee eluigwe na ala nke asụsụ dị iche iche makana ndị ọchịchị niile na-achị obodo Europe agafeela ha.
N'ime agwaetiti ndị ahụ bụ Barbados. Columbus rutere na ụsọ mmiri ya na njem mbụ ya na America, mana na narị afọ nke iri na asaa ọ dabara n'aka ndị Bekee wee bụrụ ya ruo 60s. Onye ukwe ama ama Rihanna si ebe a, nke ala a mara mma nke nwere oke osimiri na odida obodo echefughi echefu. Ọ bụrụ na nke gị bụ Caribbean, ana m ahapụ gị nke ukwuu ozi bara uru maka ịga na Barbados, Paradaịs.
2 Ihe mere ị ga-eji gaa Barbados
3 Ihe ịga leta na Barbados
O yiri ka aha agwaetiti a sitere na ndi India bi n’ime ime obodo nke ndi Europe mere baptizim barbados. Ndi biri na mbu si na oke osimiri Venezuelan wee bia na ndi ozo dika ndi Arawak na ndi Indian Caribbean. N'ime iri afọ ndị mbụ nke narị afọ nke iri na asaa ndị Bekee bịara, wuo mgbidi, tinye batrị, ma weta ndị ọbịa.
N'oge ọchịchị, akụ na ụba agwaetiti ahụ gbara gburugburu shuga, nnukwu osisi gbachiri ugbo nke ndị mbụ biri, ndị kwagara n'ebe ndịda United States, na mgbe ahụ ndị ohu si afrịka. A kwụsịrị ịgba ohu na Alaeze Ukwu Britain niile na 1834 n'agbanyeghị na usoro ọchịchị onye kwuo uche ya cherere na narị afọ nke XNUMX.
Taa akụkụ nke British Commonwealth na nwere onwe ya kemgbe 1966.
Ihe mere ị ga-eji gaa Barbados
Na ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Barbados enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ ndị dị mkpa, ọ bụ nnukwu ebe ezumike nke ezumike nke ndị Britain na ọtụtụ ndị America. O nwere ihe omuma, otutu akwukwo ndu na otu uzo di iche iche di nma, n’oké osimiri na-eme ọdọ mmiri ọdọ mmiri dị n’otu akụkụ ya na ebili mmiri ya n’akụkụ nke ọzọ.
Na Barbados ị nwere ike ịnụ ụtọ okike, gaa na ubi ndị colonial wee zuru ike. N'ime ụkpụrụ Caribbean ọ bụ ezigbo mma agwaetiti Ma ọ bụrụ na na ebe ndị ọzọ na mpaghara ị ga-agagharị na otu a haziri ahazi, ebe a ị nwere ike inyocha onwe gị. Mgbe ahụ, Kedu mgbe ọ ga-adị mfe ileta Barbados?
Oge kachasị mma nke afọ iji gaa Barbados bụ site na Jenụwarị ruo Eprel: ọ bụ oge ọkọchị na obere iru mmiri. Ọ dị ntakịrị obere okpomọkụ karịa afọ ndị ọzọ nke afọ. Na Oge ajọ ifufe Ọ bụ n’agbata ọnwa Juunu na Nọvemba na oke ifufe na -emekarị n’etiti Ọgọst na Ọktọba. Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-eme njem na ngwụcha oge ọkọchị ma ọ bụ na oge mgbụsị akwụkwọ, ị nwere ike nwee ihu igwe ma ọ bụ mmiri ozuzo na-adịghị mma.
Ee, n'oge oyi ọnụahịa dị elu Yabụ ọ bụrụ na ịga n’agbata ekeresimesi na Eprel, dị nkwado maka ọnụego dị oke elu. Ọnwa nke May bụ ezigbo nhọrọ n'ihi na ọnụahịa dị ala ma ihu igwe dị mma. Nakwa ụbọchị mbụ nke Disemba ma ọ bụ ọkara ọkara nke Mee.
Ihe ịga leta na Barbados
Anyị nwere ike kewaa agwaetiti ahụ ụzọ ise: West Coast, South Coast, East Coast, Inland, Bridgetown, na gburugburu ya. N’ebe ọdịda anyanwụ ụsọ osimiri bụ osimiri kacha mmas na ụlọ nkwari akụ kachasị ọnụ. Ndịda ụsọ oké osimiri bụ obere mepere emepe na osimiri na-enwekarị ndị mmadụ dị ka e nwere ndị surfers na ọ bụ odi mfe igwu mmiri.
Ebe ọwụwa anyanwụ bụ Atlantic na ya n'ezie nwere nnọọ ole na ole ebe na-. Ime Barbados bụ ugwu na ubi, ọgba na ubi botanicals na akpatre enwere isi obodo nke nwere ụlọ akụkọ ihe mere eme na mpaghara Garrison nke bụ World Heritage.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime osimiri kacha mma na Barbados: Agwaetiti ahụ nwere agwaetiti agwaetiti 80 na-acha ọcha na ọtụtụ n'ime ndị kasị mma n'ụwa. Na Osimiri Accra Ọ dị na Rockley, n'ụsọ oké osimiri ndịda, ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị ewu ewu ma dị ihe na-erughị kilomita ise site na isi obodo. Na-abịa site na njem ọha na eze ma ọ mara nke ọma. Na Osimiri Mullins bụ aja aja, dị n’akụkụ ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ ma bụrụkwa ihe a ma ama n’obodo na ndị njem.
La Osimiri Gibbes osisi gbara ya gburugburu, ọ dịghịkwa azụ ahịa ma ọlị. Ezigbo ụlọ ndị kacha mma dị n'àgwàetiti ahụ dị nso ma ọ bụrụ na ị gara n'oge dị ala, ị nwere ike ịnwe osimiri n'ụsọ. Mmiri dị jụụ, oke osimiri nwere ụfọdụ nkume ma ị nwere ike igwu mmiri na-ele ụlọ ndị na-agaghị ekwe omume n'ụsọ oké osimiri ahụ. Nwere ike ịga ebe ahụ site na ịga ije site na Mullins, ma ọ bụrụ na oké osimiri dị ala.
E nwere ụsọ osimiri nke ha na-ekwu Miami Beach mana ana akpo ya Entreprise. Ọ bụ aja ọcha na ọ dị na ndịda ụsọ oké osimiri, na ụkwụ nke obodo ụsọ oké osimiri nke Ostins. Ọ bụ ọkacha mmasị na ndị obodo na ngwụsị izu. Enwere ebili mmiri siri ike, ebe a na-egwu mmiri iji zụta nri na obere obere họtel. Osimiri Crane bụ otu nke kasị mma n'ụwa: o nwere aja aja pink, nkwu na okwute. Mma!
Ọ bụrụ n’inwere ego ịnwere ike ịnọ na Crane Resort, ụlọ oriri na ọ aụ luxuryụ mara mma. Osimiri a dị n’akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ ya mere ọ dị mma maka sọọfụ. Resortlọ ezumike ahụ na-ere sandwiches, salads, na pizzas. Olee otu i si eru ebe ahu? Accessnweta ọha na eze dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke osimiri ma ụlọ nkwari akụ ahụ nwere igwe mbugo ya. Osimiri ọzọ mara mma bụ nke Payne n'ọnụ mmiri.
White aja, mmiri dị jụụ dị mma maka igwu mmiri, ọ na-ewe 20 nkeji ụkwụ ma mgbe ụfọdụ enwere osimiri nduru. Enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ aroundụ gburugburu ma ị nwere ike ịdebanye aha maka njem igwu mmiri n'etiti nduru maka ihe dịka $ 100 maka mmadụ anọ. Na Ju Ju osimiri O nwere akuku di nso ya mere o jiri nwee nnukwu ọdọ mmiri igwu mmiri ndi ozo.
O nwere ogwe enyi nwere enyi na-aruta azu azu ma na-agbazi ulo ezumike na nche anwụ. Iji hụ ndị a ma ama, karịchaa n'oge oyi, ị ga-agarịrị na aja aja osimiri ọ bụ ezie na ọ nweghị ohere ọhaneze kacha mma ma ọ dị na ndịda. N'ebe ọwụwa anyanwụ ụsọ mmiri bụ Osimiri Cattlewash, sara mbara, dị mma maka ogologo ije n'ehihie. O nweghị ụlọ nkwari akụ, enweghị ebe ntụrụndụ ma ọ bụ ụlọỌ na-enye ọmarịcha nlele nke ugwu Barbados ma ikuku ikuku na-eme ka ọ dị mma.
N'ikpeazụ bụ Owu Mmiri, n'ụsọ oké osimiri ndịda ọwụwa anyanwụ. Hapụ ụgbọ ala ahụ n'elu ugwu wee gbadata ubube, rute aja, oke osimiri na-acha anụnụ anụnụ na akwụ oyibo, na Osimiri Silver Rock nke ikuku na-eme ka ikuku kitesurfing na windurfing na-enye ohere. Dị ka ego egwu m na-akwado Obere mmiri, ọnụ mmiri dị warara nke dị n’etiti oke ugwu na elu ohia nke na-etolite ọdọ-mmiri dị ebube ma nwekwa oghere ụfọdụ ebe ụgbọ mmiri ga-esi gbawaa.
Barbados bu ihe banyere osimiri na okike. Agbanyeghi na enwere omenaala obodo, ma inwere, dika anyi siri kwuo, ubi ndi colonial ileta na ufodu ihe mgbe ochie, ihe o n’eme bu imefu, zuru ike, kporie oke osimiri ma rie. Nke ahụ bụ Barbados.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Barbados » Njem ịga Barbados, ala Rihanna